Mercury dzino High Frequency Rack kupotarinopa Rack / Tower fomu chokufunga kukodzera siyana kwezvakatipoteredza. Yakanaka svikiro arambe achirema simba nedziviriro kudiwa, Pasinei ayo chiine tsoka, Ups ichi chinayo womukati bhatiri packs it chinogona kuwanikwa nomukombiyuta pamberi Panel yokuzvigadzirisa macheki uye pakutsiva pasina nokubvisa nemateru kubva ayo pani kuwedzera. The LCD vanoratidza Panel hunogona kungoparara zvava nokutsikirira mabhatani huenderane installation format, vertically kumira kana zvachose Rack pagomo. Kunze, IT vashandi vanogona kushandisa michina zvakanaka nokudzidza kuramba negadziriro yeparutivi nguva mashoko Via LCD kuratidza.
With wechokwadi miviri-kutendeuka design, Mercury akatevedzana inopa simba uye kunopindirana kudzivirira wenyu vasanonoka namano. Inogona kugamuchira vakwanise chiyamuro voltage nokuda ezvinhu akaoma. Zviri kudzivirira wakakwana nokuda kwenyu servers anokosha uye workstations.
2. Kwakachena Sine Wave goho
With wakachena Sine Wave goho, anovimbisa kugarisana nokuti zvose zvamarudzi mitoro. Its akakwana simba kudzivirira ichiita mabasa akawanda mafomu akadai networking, Telecom uye mamwe basa-dzinonetsa mafomu.
Mercury dzinogona achiri kupa kugadzikana simba kwakabatana mano pasi kusagadzikana simba runyararo.
5. Output simba chinhu 0,8
Kufananidzwa paIndaneti ups pamusika ano, Mercury yaitevedzana Ups anopa nani goho simba factorup kusvika 0,8. Rinopa yepamusoro kuita uye effciency kuti kutsoropodza mafomu.
6.ECO muoti mashandiro kuti simba kuponesa
7. Emergency Power Off (EPO) Rinoshanda
8. USB + RS232 + RJ45 + SNMP vakawanda kutaurirana kuti 1-3K yokutevedzera
Nyaya iyi inobvumira kana USB, RS232 kana Rj45 kukurukurirana chengarava kushanda SNMP inowanikwa panguva imwe chete.
• Humanized remadziro vanoratidza uye turnable LCD chinovhara
Front Panel pamwe LCD chidzitiro, nzwisisa kuratidza nenzira manhamba uye Graphics nezvimwewo, LCD nechidzitiro anogona tenderera pachena, uye LCD vanoratidza zvinogona kupindirana vose kuisa Tower mhando kana Rack akatasva mhando kupota.
The chokugadza kwadzinoita Racks uye shongwe kupota zvinogona zvemasanga nokuchinja, The hanger nokuti Racks uye stents kuti shongwe kupota vari anongoitika mwero waida, nyore kusarudza achishandisa vanoshandisa.
High Frequency Rack kupota
≧ 0.99 @ chezita voltage (chiyamuro voltage)
50 Hz ± 0.25 Hz kana 60Hz ± 0.3 Hz
100% ~ 110%: anzwike nyevero
110% ~ 130%: Ups akadzivira pasi mumasekonzi 60 panguva bhatiri muoti kana kuchinjwa yokunzvenga kana utility romuzvarirwo
> 130%: Ups akadzivira pasi pakarepo bhatiri muoti kana kuchinjirwa yokunzvenga muoti kana utility romuzvarirwo
4 maawa kupora 90% vanokwanisa
Asingasviki 50dBA @ 1 Meter
Previous: 10-20KVA High Frequency Rack Ups (3: 1) Next:20KVA-210KVA Modular kupota
6-10KVA High Frequency Rack kupota